Real Doll Doll Lifelike Iibso Qiimo Jaban Iibinta Dolls Raga Ugu Habboon ee Saxa ah
Iib Kulul Nolosha Dhabta Ah Ee Galmada Dolls
148CM Ilkaha Waaweyn Maqaarka Maqaarka TPE ee Doll Doll
Flat Laabta Wareegsan Gabadh Jaban ah oo TPE Wasmo Galmo ah
Intooda badan waxay iibsadeen 148CM Sexy Big Breasted Life size Realistic Doll Doll
Timaha Isukeelista Casaanka ah ee Ciyaarta Indhaha Weyn ee TPE Jinsi Doll
150CM B Koobka Soojiidashada Saaxiibka Xaragada TPE Jinsiga Doll
Iibinta caruusadaha dhabta ah ee Jinsiga dhabta ah
Xiomara - AXB Doll Madaxa aan lagala bixi karin EVO Version 141cm TPE Doll Sex
Agatha - 150CM D-koob Maqaarka midabkiisu yahay Midab TPE Jinsiga Doll
Leslie - Mid Naasaha Midabada Caatada ah TPE AXB Dolls
Alma - Naaso Waaweyn Booty Love AXB Dolls
Caddaaladda - Naasaha Wayn ee Naasiga ah ee TPE AXB Dolls
Meroy - 166CM Silicone Madaxa Cute Girl Japanese TPE Doll Doll ee Ragga
Belloc - 158CM Boob weyn oo Lugaha Furaha TPE Doll Doll
$ 1,168.62$ 1,168.62
Valentine - 150CM Rose Goddess Brown Maqaarka TPE Galmada Doll
Fiktooriya - 150CM B -koob Doorka Ciyaarista TPE Galmada Doll
$ 1,094.41$ 1,094.41
Payton - 150CM Naasaha Waaweyn ee Anime Irontech Dolls
Alexandria - 140CM Seme Booty Anime WM Dolls
$ 1,253.15$ 1,253.15
Nicola - 162CM E-cup TAN Maqaarka WM Doll Doll
Bernal - Indho Buluug Weyn 151CM TPE Doll Doll
Simona - 157CM Arday B Koob Naas galmo Doll
$ 1,451.00$ 1,958.02
Janet - 157CM WM B Cup Skier TPE Doll Doll
Hilary - 156CM Ibliis yar oo Fiican oo WM ah Doll Doll
Harlow - 140CM D -Cup -ka weyn ee Naasaha TPE Doll Doll
$ 1,252.13$ 1,252.13
Piper - 157cm B-cup Indho waaweyn ayaa kugu Dhunkanaya Gidaarka WM Dolls
Aurora - 162CM F-Cup WM Tan Maqaarka TPE Doll Doll
Caroline -1 57cm B-koob Wadnaha Wadnaha Doll
Caadi - 148cm Macallin Sexy Bezlya TPE Doll Galmada
$ 1,281.45$ 1,391.46
Oleander - Qiyaasta 145CM Quruxda Quruxda Badan ee Doll Galmada
$ 1,281.45$ 1,391.45
Begonia - 148cm Blue Elf TPE Doll Galmada
Freesia - 158CM TPE Induction Doll Galmada
$ 1,396.95$ 1,457.26
Unicorn - 156CM Naas weyn Cowboy Sexy Bezlya Doll Sex
Rin - Dollhouse 168 Sexy Chinese Beauty Big Naasaha Wasmada Doll
$ 2,166.94$ 2,265.44
Olga - 158CM Big Boobs Maqaarka Maqaarka ah ee Doll Jinsiga Doll
$ 1,354.11$ 1,354.11
Raleign - 158CM E Cup Sarkaalka Booliska Boliiska Hot Sex Doll
$ 1,370.28$ 1,370.28
Halle - 145CM Dollhouse 168 Tan Maqaarka Jirka Buuxa Doll Galmada
$ 1,404.95$ 1,404.95
Scarlette - 145CM NO.58 Madaxa Tan Maqaarka Pornstar Doll Sex
$ 1,459.41$ 1,459.41
Naas-nuujinta Siigaysiga Jirka ah
Xiaoyou - Buuxi Jirrabka Lolita Jacaylka Doll Torso Dadka Waaweyn Lab Ee Ciyaaraha
Hawlgal Better Doll Torso Gabdho aan waxba galabsan Xiaomei
Gabadh Addoon U Ah Oo La Adeegsanayo Maya Naasaha Naasaha Jacaylka Doll Qurxoon Jir
3D Adult Toy Solid Half Torso Dumar Lugaha 2 Hole Doll Doll
Buuxi Buuxi sexy Fantasy Larkin Love Doll Lugaha quruxda badan
Model Yurub Salsa Butt Model Real Rogay Dhimasho Doll Dameer 2 god
Barroosinka Kuuriya Cai Bin Jirka dhabta ah ee La beddelay Hip Butt Sex Doll Ass
Waa maxay caruusada galmada ugu fiican cabirka nolosha?
Ma leedahay wax kuu gaar ah ciyaal caruusad dhab ah? Hadda, iyagu waa isbeddel ku cusub Waqooyiga Ameerika. Marka laga hadlayo caruusadaha, waxaa laga yaabaa inaad marka hore ka fikirto caruusadaha la buufin karo. Laakiin taasi waa xiisaddii tagtay. Caruusadaha ugu caansan waxaa soo hindisay badmareenada reer Holland qarnigii toddoba iyo tobnaad oo ay ku go'doomeen badweynta intii lagu jiray safarada dhaadheer. Waxay ogaadeen inay ku dabooli karto baahidooda siyaabo kala duwan. Ka samaysan dhar tolmo ah ama dhar duug ah, caruusadahaan siigaysiga ah waa hordhaca tooska ah ee caruusadaha galmada maanta. Dabcan, horumarka tikniyoolajiyadda, waxay ku soo dhowaanayaan dadka dhabta ah. Sanadihii la soo dhaafay, koox soo saareyaal ah, oo ay hogaaminayaan urdolls, ayaa soo saaray caruusadaha ugu dambeeyay ee waxqabadka tooska ah. Waqtigan xaadirka ah, doll-ka ayaa caan ku ah Waqooyiga Ameerika iyo Yurub.
Kahor intaadan iibsan caruusaddaada. Waa inaad wax ka ogaataa macluumaad ku saabsan caruusadaha galmada cusub. Boggeena waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan noocyada caruusadaha dhabta ah. Caruusadaha Aasiya waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay shakhsiyadooda yaryar ama dhoola cadeynta aan waxba galabsan ee ragga dhiigga kulul ka dhigaya mid jecel jacaylka. Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la joogto soo jiidasho iyo qalaad Jinsiga jinsiga Japan. Waxay xitaa noqon kartaa khiyaaligaaga anime ee dhalinyaradaada. Halkan waxaan ku baran doonaa taariikhda caruusadaha, doorashooyinka hadda ka socda suuqa iyo xulashooyinka kala duwan marka la dooranayo caruusadda.
Laga soo bilaabo 2012, caruusadaha galmada la buufin karo ee suuqa kuyaala ayaa si tartiib tartiib ah loogu badalay caruusadaha TPE iyo caruusadaha silicone. Beddelada Thermoplastic elastomer ee loo yaqaan TPE ayaa badanaa la isticmaalaa, gaar ahaan maxaa yeelay caruusad jinsi macquul ah sameeyayaasha ayaa ka fiican tayada sare. Way ka jaban tahay in la sameeyo alaabada lagu ciyaaro ee silikoon lagu daaweeyo platinum qaali ah. Qaar ka mid ah soosaarayaasha caruusadaha casriga ahi waxay ku darsadeen nidaam kuleyliyaha gudaha caruusadooda silikoonka.
Caruusadaha TPE iyo caruusadaha silikooniga ah mid waliba wuxuu leeyahay faa iidooyin u gaar ah. Qalabka TPE ayaa ka jaban. Qiimaha caruusadda dhabta ah ee loo yaqaan 'doll doll doll' ee laga sameeyay maaddada TPE ayaa ka hooseysa qiimaha doll silikoon ah. Dabacsanaanta iyo jilicsanaanta ayaa waliba wanaagsan. Qalabka silikoonku waa ka qaalisan yahay, laakiin caruusadaha silikoonku waa kuwo waara oo aad ugu dhow xaqiiqda. Caruusadaha Silicone-ka asal ahaan waxaa laga sameeyay silikoon-daan lagu daweeyay, laakiin tikniyoolajiyadda platina waxay leedahay nolol adeeg dheer waxayna u nugul tahay jeexitaanka iyo indentation.
Aadanaha galmada jinsiga ah ee jinsiga ah ee jecel waxay dooran karaan 70 dhillooyinka noocaas ah oo ku yaal Japan waxayna doortaan dhillankii ugu horreeyay noocan oo kale ah ee Yurubta ah Maarso 2017. Marka laga eego aragtida maamulka, caruusadaha waa shaqaale ku habboon, had iyo jeer way joogaan halkan maxaa yeelay weligood ma buko, marwalba waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan, waxay bixiyaan dhammaan saddexda god, wax cabasho ah ama khidmado dheeraad ah ma jiraan. Shirkadaha qaar waxay adeegsadaan isla tiknoolajiyad sida sameynta alaabada lagu ciyaaro ee dheeriga ah si ay u sameeyaan caruusadaha calalka. Iyada oo isticmaalka baaxadda leh ee internetka ee jiilka soo koraya, waxaa jira goleyaal badan oo hiwaayadda u ah oo adeegsada maro ama waxyaabo kale si ay iyagu u sameystaan caruus wasmo jaban.
Horumarka joogtada ah ee bulshada, bini aadamku wuxuu raadinayey habab uu nolosha si fiican ugu raaxeysto. Jidka madadaalada ayaa isna aad iyo aad u sii kordhay. Caruusadaha jinsiga ee tayada sare leh waa mid ka mid ah hal-abuurka ugu weyn ee ilbaxnimada aadanaha. Cabir buuxa, curisyo dabiici ah oo hodan ah, oo shaqadooda ugu weyni tahay qancinta dareenka dadka. Iibsashada iyo adeegsiga caruusadaha maanta waa soo badanayaan, sida khaniisiinta ay xuquuqdooda u leeyihiin. Kuwa kale saaxiib kulama noqon doonaan adiga maxaa yeelay waxaad isticmaashaa boombalaha galmada. Waxa ay tahay inaad ogaato ayaa ah inay taasi tahay mudnaantaada.
Dad aad iyo aad u tiro badan. Waxay u egyihiin dumar dhab ah. Waad ku noolaan kartaa riyadaadii ugu xiisaha badneyd - mid ka mid ah caruusadaha galmada ugu macquulsan ee ugu macquulsan, waxaad kuu keeni kartaa daqiiqadahaaga ugu farxada badan. Waxay u egyihiin naag dhab ah waxayna dareemayaan sidii naag dhab ah. caruusad jinsi oo cabir buuxa leh hadda waa mid nool. Iyada oo timaheeda aadanaha, maqaarka jilicsan, muuqaalada wajiga shucuurta iyo gooladaha sasabashada, waxay umuuqataa mid aan lagu kala soocin karin haweeneyda dhabta ah jaleecada hore. Noocyada dhabta ah ee caruusadaha jinsiga ayaa si taxaddar leh loo farsameeyay loona qaabeeyey dadka dhabta ah.
Haddii aad rabto inaad iibsato iibso caruusadaha dhabta ah ee ragga, jooji daawashadooda maxaa yeelay waxaad joogtaa meesha saxda ah. Laga soo bilaabo caruusadaha yaryar iyo kuwa jilicsan ilaa kuwa waaweyn oo sharraxaya caruusadda caruusadda lagu ciyaaro ee ugu macquulsan: waxaa jira noocyo dhadhan ah oo kala duwan! Qof kastaa wuu heli karaa caruusadiisa uu jecel yahay, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan, way ku kala duwan yihiin maaddada, qalabka iyo muuqaalka. Dumarka galmada, waxaad isku dayi kartaa jagooyin kala duwan. Sidaa darteed, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay nooc tababar ah.
Riwaayado Jinsi oo Imaanaya oo Cusub
Riwaayado Qurux Badan oo Jinsi ah
Jessica - Dollhouse 168 E Cup EVO Edition 150CM Jinsiga Doll
Jessica waxay fiiro gaar ah u leedahay dayactirka timaha. Musqusha guriga waxay leedahay qaboojiye heerkiisu sarreeyo iyo shaamboo gaar ah, waxayna badanaa aadaan qaybta qurxinta. Asal ahaan, qaabka timaha si isdaba-joog ah ayaa loo beddelay bil kasta. Qaabka timaha oo isku mid ah ma sii socon doono seddex bilood, laakiin had iyo jeer waxay ahayd timo dhaadheer waqti go'an. Haddii aad rabto shaqo culus oo koronto ku shaqeeya, markaa iyadu sidoo kale way leedahay. Waxay si sharaf leh u fuuli doontaa ciyeygaaga adag oo ay nuugi doontaa. Ma haysto fal-celin matag ah. Laga soo bilaabo siilka xiiran ilaa dameerka quruxda badan, waxaad ka qaadan kartaa wax kasta oo aad rabto. Way ogtahay sida ay ugu dhowdahay nin iyo qol jiif. Waxay jeceshahay waxyaabo qurux badan, waxayna inta badan rajeyneysaa muuqaalka Prince Charming. Waxay aad u rajeyneysaa jacaylka jacaylka. Gabadha yar dabeecaddeeda waa mid aad u qurux badan. Shakhsiyaddeedu waa mid faraxsan, laakiin shakhsiyaddeeda dabacsan ayaa weli jirta. Dadkuna waa taxaddar la'aan badanaana waxay sameeyaan waxyaabo qaldan. Iyadu waa doll jinsi aad u macquul ah oo leh madax iyo jir aan laga saari karin.
Rin - Dollhouse 168 Sexy Chinese Beauty Big Naasaha TPE Sex Doll
Rin waa shiine. Waxay leedahay naaso qurux badan oo F-cup ah. Dad badan ma caawin karaan laakiin waxay rabaan inay leefleecaan. Iyadu waa dhakhso badan tahay, caddaalad tahay, laga yaabee inay xoogaa qabow tahay. Tani waa wax caadi ku ah asxaabta ku hareeraysan. Waxay ku dhalatay qoys caadi ah oo ku nool caasimadda. Waxay waligeed ahayd gabar aad u madax-bannaan. Waxay ka guurtay guriga ilaa ay ka gaadhay 15 jir. Bilow inaad raadiso nolol aad ubaahantahay. Ka dib markay guurtay, waxay la kulantay dib u dhacyo badan. Laakiin waligeed isma dhiibin. Caqligeeda iyo xamaasadeeda, waxbaa ka hor istaagi kara inay gaarto awooddeeda buuxda. Waxay dhawaan noqon doontaa xoog lagu xisaabtamo.
Athena - C Cup Dhexdhexaad Yar Timo Gaaban 165CM Cabbirka Baaxadda Jinsiga
Athena waxay ka timid Jarmalka. Iyadu waa doll-xajis buuxa oo leh jidh soo jiidasho leh. Dhexda ayaa yar, oo naasaha iyo badhida ka dhigaysa mid sii yaab badan. Fiiri wejiga malaa'igta, indhaha naxariista leh, indhahaaga ha ka soo daayaan lafoheeda dhabannada dhaadheer iyo sanka qurxan ee bushimaheeda jilicsan, qoorta galmada iyo xuubka qaawan. Si qarsoodi ah u hadla, riyadeeda wax walba waa laga xayuubiyaa. Waxay u baahan tahay oo kaliya nin xoog leh oo ilaaliya iyada oo la kulanto baahideeda galmada ee aan ku qanacsanayn. Waxay leedahay jir soo jiidasho leh oo u oggolaanaya inay ku wareejiso guriga maxaa yeelay waxaad ku raaxeysan kartaa soo jiidashada xiisaha leh ee dhinacyada oo dhan. Haddii aad raadineyso waayo-aragnimada ugu gaarka ah ee lammaanahaaga, markaa doll-ka dhabta ahi waa doorashadaada ugu fiican. Isku-dhafka jilicsan ayaa daboolaya birta birta iyo TPE taabashada ayaa bixisa natiijooyinka ugu fiican.
Maxaad nooga iibsanaysaa?
Waxaan u fidinaa macaamiisha adeeg iibsi habsami leh si aan uga caawinno macaamiisha inay helaan caruusado iyaga u gaar ah oo lagu qanco. Markaad wax su'aalo ah ka qabtid caruusadaha galmada, waanu kaaga jawaabi doonaa markii ugu horreysay. Caruusadaha ayaa ka ammaan badan galmada dhabta ah, uma baahnid inaad ka walwasho uurka ama cudurada galmada lagu kala qaado!
URDOLLS waxay u heellan tahay sameynta caruusadaha aadka u macquulsan. Dhamaan caruusadaha waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo dadka dhabta ah. Sawir qaadayaasheena waxay leeyihiin 30 sano oo waayo-aragnimo tusaale ah ah. Weji kasta oo doll wejigiisa iyo inch kasta oo maqaar textured ah ayuu sayidku ku xardhay. Darajada jilitaanka ayaa ugu sareysa 98% ama ka badan. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay xubin aad u macquul ah oo saaxiibtinimo leh oo leh muuqaal isku mid ah oo run ah oo isku mid ah oo ah 99% ama ka badan, taas oo siinaysa dareen ah inaad tahay qof dhab ah. Waxaan hubinnaa inaan ku siino adeegga ugu fiican iyo khibrada ugu wanaagsan ee isticmaale.
Waxaan xafladaha xafladaha ku qaban doonnaa xaflad kasta. Keenida dalabyo deeqsi ah dadka isticmaala. Markii aan qabanno dalacsiin, waxaad isticmaali kartaa lambarka kuuboon si aad wax u iibsato. Hel dalab waxqabad. Hadaad iibso caruusadaha galmada inta lagu jiro dhacdada, badanaa waxay kuu keydineysaa lacag aad u badan.
Waxaan soo saarnay tikniyoolajiyad wax soo saar oo gaar ah, iyo koox xooggan oo farshaxanno qurxiyo ah kana kooban farshaxanno xirfadlayaal ah, injineero iyo xirfadlayaal. Nidaam kasta oo wax soo saar, waxaan leenahay shuruudo aad u adag iyo xakameyn tayo leh si aan ugu dadaalno kaamil ahaanta. Kuu ogolaanayaa inaad astaysto caruusadan casriga ah ee qaybaha kala duwan ee jirka-hubinta inay ku habboon tahay sawirka gabadha riyadaada.
Caruusadahayagu waxay u muuqdaan kuwo kafiican, waxay dareemayaan wax dhab ah, oo sii dheeraanaya! Way fududahay. Boon kasta oo urdolls ah wuxuu leeyahay goob galmo oo aad u faahfaahsan. Maqaarkoodu wuu jilicsan yahay. Tusaale ahaan, naaska si raaxo leh ayaa loo ruxaa. TPE / silikoonku wuxuu leeyahay cimri dherer sare wuxuuna kordhiyaa nolosha caruusadda.
Caruusadahayagu waxay ka samaysan yihiin TPE ama qalabka silikoonka. Naqshadeynta gaarka ah ee jiilka cusub ee birta-birta-sare ee birta-birta-birta ah waa sida qalfoofka jirka jirka oo kale. Waxay samayn kartaa qaabab kala duwan iyo dhaqdhaqaaqyo sida dadka dhabta ah, waara, oo aan fududayn in la xidho oo dabacsan. Tikniyoolajiyad cilmi baaris oo casri ah iyo farsamo wanaagsan oo lagu soo saaro caruusado tayo sare leh. Si weyn kor ugu qaad khibrada macaamiisha.
Dhamaan caruusadaha ku yaal dukaankeenna waxaa loo sameeyay iyadoo loo eegayo saamiga dadka dhabta ah. Xaqiiqdii iyagu waa cabirka jirka aadanaha. Tan la yaabi maysid, waxaad u malayn doontaa inay yihiin qof nool. Waxaad haysataa hubinta tayadayada.
Boonkeenu wuxuu ka kooban yahay qalfoof bir ah gudaha. Way fududahay in la sawiro oo la xidho, in kasta oo maqaarkooda jilicsan u nugul yahay culeys xad dhaaf ah. Miisaaniyaddoodu way ka cimri dheer yihiin caruusadaha kale. Taasi waa sababta ay u guuleystaan ​​dad badan. Jilicsan oo la awoodi karo Jilicsan oo fidsan, waxaad arkaysaa in laabta iyo miskaha caruusadu si fudud u lulayso markay dhabarka iyo gadaal u salaaxayso.
Markaad habaynayso caruusaddaada. Waxaad nagala soo xiriiri kartaa caawimaad ahaan emayl. Markii caruusadda la raro, waxaan kuu soo diri doonnaa lambarka raadraaca, waxaanna u adeegsannaa Fedex iyo DHL si aan u dardar-gelinno rarka una hubinno in si ammaan ah loo gaarsiiyo. Waxaan sidoo kale tixgelineynaa arimahaaga gaarka ah, sidaa darteed ma jiri doonaan wax sumad ah sanduuqa, xitaa haddii magaca shirkadeena uusan muuqan. Nidaamka soo saarida caruusadda badanaa waxay qaadataa 3 illaa 8 maalmood in la dhammaystiro. Marka caruusadaadu waa inay ku gaarto meeshii loogu talagalay 8-20 maalmood iyada oo loo marayo habka ugu dhaqsaha badan ee wax soo saarka iyo rarka adduunka.
Waxaan macaamiishayada u soo bandhignaa ikhtiyaarro kala duwan oo bilaash ah, sidaa darteed waxaad dooran kartaa qaabka aad u jeceshahay si xor ah. Waxaad dooran kartaa jaceylka saxda ah ee aad qiyaasi karto iyadoo ku saleysan qeybaha kala duwan ee doll-ka websaydhka. Ikhtiyaarrada caruusadaha ee khaaska ah.
Dhamaan caruusadahayaga waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo dookhaaga (oo ay ku jiraan dhererka, timaha, midabka maqaarka, indhaha iyo waxyaabo kale oo badan). Naqshadee doll gaar kuu ah Haddii aadan heli karin qaab lagu qanco, fadlan nala soo xiriir emayl ama taleefan, waxaan ku siin doonaa jawaab lagu qanco.
Nidaamyadeenna dambe ee difaaca ayaa la ilaaliyaa waxaanna u isticmaalnaa Paypal si aan u hubino sirtaada iyo amnigaaga. Ma jiraan wax ku jira biilkaaga oo muujinaya nooca iibsigaaga.
Dhamaan caruusadaha galmada ee ku yaal dukaankeennu waa rar bilaash ah. Waxaana loo diri karaa waddan kasta oo adduunka ah. Qiimaha aad ku aragto websaydhka waa wadarta qiimaha aad ugu baahan tahay inaad ku yeelato caruusadda. Lacag dheeraad ah kaa qaadi maayo. Kharashka dhoofinta ee looga baahan yahay in lagu qaado caruusadaha dhammaantood annaga ayaa xambaaran.
Caruusadaha galmada waxay noqdeen hanti muhiim ah dhexdeenna, runtiina waa mid kamid ah hababka ugu waxtarka badan uguna qanacsan ee lagu wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya dadka iyo guud ahaan farxadda nolosha galmada. Horumarka bulshada, dadku waxay si tartiib tartiib ah u heleen adeegsiyo kale oo badan oo caruusadaha ah. Xitaa waxaa si sii kordheysa loogu adeegsadaa waxbarashada galmada ee carruurta. Dolls-yada waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa mannequins moodooyinka farshaxanka jirka iyo barashada caafimaadka. Haweenka quruxda badan ayaa badanaa loo isticmaalaa sidii mannequins ee warshadaha moodada. Dabcan, dad badan ayaa u adeegsada caruusadaha sawir qaadista iyo ururinta. Qaar badan oo caruusadaha ah looma isticmaali karo ujeedooyin galmo.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaatid midka aad ka tirsan tahay oo aad fariisato kursigaaga. Macno malahan nooca caawinaad ee aad ubaahantahay, nolosha galmada iyo shuruudaha xiriirka galmada, caruusadaha ayaa kaa caawin kara siyaabo badan. Ku raaxayso daalacashada xulashadayada heer caalami, waxaan haysannaa caruusado midabbo kala duwan leh, timo iyo isir ahaan. Mustaqbalka, waxaan arki doonnaa caruusad jinsi oo macquul ah oo leh caqli macmal ah, oo la filayo inay u keento dareenno bini-aadam u eg. Waxaa laga yaabaa in mustaqbalka qof walba uu ku yeelan doono caruusad caqli badan guriga.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kuu keeno qiimo macquul ah, faahfaahsan, silikoon tayo sare leh ama doll TPE. Ka dib markii aad qaadatay go’aanka weyn inaad yeelato boombalaha galmadaada, waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato boombalada iyo tilmaamo iyo tilmaamo ku saabsan helitaanka caruusada ugu fiican. Waxaan danaynaynaa farxaddaada. Wax soo saarkeenu waa caruusadaha ugubadan uguna macquulsan uguna tayada sareeya suuqa maanta suuqa, qiimahooduna wuxuu gaadhay heerka tayada iyo faahfaahinta aan ku soosaarayno qiimaha ugu fiican. Waxaa naga go'an inaan si isdaba joog ah u hagaajino dareenka dhabta ah ee caruusadaha isla markaana aan u siino qiimayaal tartan u ah caruusadaha ugu fiican. Waxaan ka soo horjeednaa been abuurka iyo lacago dheeraad ah.
Caruusadaha galmada ugu jaban waa la buufin karaa waxayna isticmaali karaan hawo. Qiimaha macquulka ah awgood, macaamiil badan ayaa diyaar u ah inay iska indhatiraan qasaarooyinkiisa. Laakiin qaddar yar oo la isticmaalo ka dib, waxay inta badan ku dillaacaan marinnada. Bartamaha qiimaha suuqa, caruusadaha waxaa laga sameeyaa vinyl qaro weyn ama cinjir culus. Caruusadaha ugu qaalisan waxaa sida caadiga ah laga sameeyaa silikoon ama elastomer heerkulbeeg ah. Caruusadaha ka samaysan maadada silikoonku waxay noqon karaan kuwo aad u macquul ah. Sida caruusadda magaca 'GYNOID Doll brand', ayaa loogu talagalay qof bini aadam dhab ah, wuxuu leeyahay maqaar maqaar wax ku ool ah (oo la mid ah maqaarka loo isticmaalo filimka saamaynta gaarka ah), wuxuuna leeyahay timo ku dhow caadi (ama xitaa dhab ah).
Dooro caruusado waara
Aragtidayda, noloshu waa kor iyo hoosba. Kaliya markaan la kulmo luminta weelka, waxaan ogahay wax badan oo ku saabsan xiisaha fuulitaanka dhamaadka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hesho caruusad la habeyn karo. Hubso in timahaaga, maqaarka, indhaha, bushimaha iyo astaamaha kale si taxaddar leh loogu talagalay in lagu muujiyo muuqaal macquul ah oo macquul ah. Waxaad bilaabi kartaa inaad dareento dareen kacsi dhab ah, qeylada kaa dhigeysa inaad ku qanacsan tahay. Hubso in caruusaddaada galmada ka samaysan tahay qalab tayo sare leh. Hadday tahay TPE ama silikoon.
Intii aad jidka ku jirtay, waxaa laga yaabaa inaad ciirsi la'aan noqoto oo aad naxariisato, oo waxaa jiri doona ilmo iyo oohin. Laakiin marwalba waxaa jiri doona daqiiqado sidan oo kale ah, caruusadda ayaa kuu keeni doonta dareenno cajiib ah waxayna siin doontaa garaaca wadnaha oo kala duwan iyo taabashada nolosha caadiga ah. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ka fikirto uurjiifkaaga markaad dooranayso. Noocee nuuca doll ah ayaad jeceshahay. xarago? Niyad jab weyn? Dameer weyn? Qof walba dhadhankiisu wuu ka duwan yahay. Xulashooyinka aan bixinno waxay ku habboon yihiin macaamiisheenna. Dhamaadka waxaad tixgelin kartaa qiimaha kala duwan. Had iyo jeer waa fikrad fiican inaad lacag dheeraad ah naftaada ku darto si aad marwalba u ilaaliso nabadaada gudaha iyo qanacsanaanta galmada. Kuuma oggolaan doonno inaad lacag badan bixiso. Siyaabaha laguugu oggolaan karo inaad ku raaxeysatid galmada inta ugu badan ee suurtogalka ah, laakiin qiimuhu ma burburin doono lacagtaada. Xaqiiqdii, caruusadaha ayaa kaa caawin kara inaad badbaadiso guurkaaga ama caafimaadka maskaxdaada.
Caruusadahaani way fududahay in la sawiro oo la xidho, in kasta oo maqaarkooda jilicsan uu u nugul yahay culeys xad dhaaf ah. Maqaarka sidoo kale si fudud ayaa loogu wasakheeyaa dheeh, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad kaliya dharkaaga uxirto caddaan. Caruusadaha ayaa ka caawin kara dadka awoodooda oo dhan, dadka aan awoodin inay qanciyaan rabitaanka galmada ee xiriirka caadiga ah, dadka qaba ama ka baqaya cudurada galmada lagu kala qaado, dadka raba inay xiriir la yeeshaan la-hawlgalayaasha cillad galmo, iyo inay wax badan ka ogaadaan noloshooda galmada Isbedelka iyo reynreyn. Waxaa loo isticmaali karaa hiwaayado ahaan ama ujeedooyin ganacsi. Sidaa darteed, caruusadaha ma aha oo kaliya toy-yada dadka waaweyn. Waxay kuxirantahay ujeedada aad rabto inaad ka hesho caruusadaha galmada ama alaabada lagu ciyaaro ee ka yimaada alaabta, waxyaabaha kale, hana iloobin muuqaalka. Jacaylka naftaadu waa bilowga jacaylka nolosha oo dhan. Dad badan ayaa u dagaalamaya kuwa kale inta ay nool yihiin. Murugada iyo farxadda, sida biyaha la cabbo, ayaa yaqaan sida loo diiriyo iyo qabowga. Sii naftaada fursad aad ku noolaato naftaada! Iibsiga caruusadaha, si fiican ayaad ugu noolaan kartaa.
Adiga, waayo-aragnimadu waa furaha, iyo barashada galmada caruusadda ayaa kaa dhigi doonta inaad waxbadan tuugsatid maalin kasta! Qanacsanaan waa magaca dhexe ee caruusadda. Si fiican u fiirso jirkeeda oo ii sheeg waxaad aragto. Caruusadaha ayaa faa iidooyin badan u keeni kara ragga kelida ah ama dumarka iyo xitaa lamaanayaasha. Dumar badan ayaa iibsada caruusadaha sawirka, qurxinta ama qaabeynta. Macaamiisha qaar waxay leeyihiin la-hawlgalayaal, laakiin sidoo kale waxay u isticmaalaan caruusadaha galmada si ay isugu dayaan khiyaali iyaga oo aan dhaawicin labada qaybood ee kale. Marka laga tago orgasms-ka dumarka ka dhigaya kuwo qurux badan oo soo jiidasho leh, oo xagga ruuxa ka farxiya, dumarka inta badan ku raaxeysta kacsiga ma dheeli tiri karaan oo keliya nidaamka hoormoonka galmada, laakiin sidoo kale waxay xoojinayaan difaacooda. Khatarta kansarka naasaha iyo makaanka afkiisa ayaa sidoo kale aad u kordhay. Waqtiyadaan, dadku ma sii niyad jabsanaadaan, ma sii baqayaan, ma dhageystaan ​​codkooda gudaha, naftooda ha noqdaan, ha tanaasulin, ka saaraan walwalka aduunka oo dhan, kana takhaluso dhamaan shakiga ku saabsan naftooda.
Maxay ragga ugu baahan yihiin caruusadaha galmada?
Ragga waxaa ka buuxa rajo imaanshaha robotyada galmada
Maxay yihiin siyaabaha wax ku oolka ah ee loo ilaaliyo caruusadaha galmada?
Dadka waaweyn oo kaliya (18+)
Websaydhkani wuxuu ka kooban yahay waxyaabo qaangaar ah wuxuuna ku habboon yahay oo keliya kuwa 18 sano ama ka weyn. Dhagsii Gali oo keliya haddii aad tahay ugu yaraan 18 sano jir.